လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အထာကျကျ ဈေးဗန်းခင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၄)သွယ် - For her Myanmar
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဈေးဗန်းခင်းမယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီဟုတ်? တကယ်တော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ဈေးဗန်းခင်းတယ်ဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံရိပ်ကောင်းပြီး ကိုယ့်ကို လိုလားတဲ့သူ၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့သူတွေ တိုးလာဖို့ ကိုယ့်အရည်အချင်းးကိုယ် ထုတ်ပြတာပါပဲ။ ဒါကို Self Marketing တစ်ဖြစ်လဲ Self Branding လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို Self Branding ကို အထာကျကျ လုပ်တတ်ပြီဆိုရင်တော့ လူချစ်လူခင်လည်း ပေါများလာမယ့်အပြင် ရာထူးတက်ဖို့လည်း ပိုပြီး လွယ်ကူတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Self Branding လို့ ပြောလိုက်ရင် တော်တော်များများ တွေးကြောက်တတ်ကြတာက ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းချည်း ကိုယ်ပြောနေရင် လူအမြင်ကတ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ ပြဿနာပါပဲ။ Introvert သမားတွေဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ နဂိုကမှ စကားက မပြောချင်ပါဘူးဆို ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ထိုင်ပြောနေရတော့ကာ… အဆင်မပြေပါဘူးရှင်ပေါ့ ယောင်းတို့ရေ… ဆိုပေမဲ့ ချက်ချင်းကြီး လက်မလျှော့လိုက်ဘဲ ဒီနည်းလမ်း (၅)မျိုးကို သုံးပြီးတော့တော့ ကြိုးစားကြည့်ပါဦးလို့ တိုက်တွန်းပါရစေနော်… ဘယ် နည်းလမ်း (၅)မျိုးလဲ ဆိုတော့ကာ…
၁။ မိမိအပြုအမူကို သတိထားထိန်းသိမ်းခြင်း
ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံးက မိမိကိုယ်ကို သိမှုပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိခြင်းရဲ့ နောက်မှာတော့ သတိထားထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတာက လိုက်လာပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပြောစရာ စကားရှိလာရင် စကားကို ထိန်းသိမ်းပြီးပြောတာ၊ ကိုယ့်နေရာကို သိပြီး ပြောတာမျိုးနဲ့ အပြုအမူနဲ့ စကားလုံးရွေးချယ်မှုတွေကို သတိထားပြောဖြစ်သွားတာ စသဖြင့်ပေါ့.. ဒါတွေဟာ သူများအတွက် စဉ်းစားပေးတယ်လို့ တွေးကြည့်ရင် ရပေမဲ့ တကယ့်တကယ်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုလည်း မြင့်တက်စေပါတယ်။ လူတွေနဲ့ တအားရောစရာလည်း မလိုဘဲ အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
၂။ အခြားသူတွေကို ကူညီပါ။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့သူတွေကို ကောင်းတဲ့ဘက်က ကူညီပေးတတ်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် မြေတောင်မြှောက်ပေးတတ်သူတွေ ဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်ပါ။ အရာရာတိုင်းမှာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ကူညီအားပေးလိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် စေတနာကလည်း ရောင်ပြန်ဟပ်မှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စေတနာနဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ကိုယ့်အပေါ် အခြားသူတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးတတ်ပါတယ်။
Related Article>>>ကုမ္ပဏီတွေက ဘာကိုမူတည်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောနပ်စ်ဘယ်လိုပေးသလဲ ?
၃။ လိုအပ်တဲ့အချက်ကိုပဲ ပြောတတ်ပါစေ။
လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် နေဖို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်… ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုလုံးကို နားထောင်နေဖို့ကျတော့လည်း ဘယ်သူက အားမှာလဲနော်.. ဒါကြောင့် ကိုယ်ပြောစရာ ရှိလာတယ်ဆိုရင် ပြောလိုရာ အကြောင်းရင်းကို တိုတိုနဲ့ ရှင်းရှင်း၊ လိုရင်းကို ပြောတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဖော်ပြတတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးသေးတယ်လေနော်… ဒီလို စကားပြောကောင်းခြင်းဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် လက်နက်တစ်ခုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
၄။ အရှိကို အရှိအတိုင်းနေပါ။
ကိုယ့်အကြောင်း ကောင်းတဲ့အချက်တွေချည်း ရွေးပြီး Self Branding ကို မြှင့်တင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ယောင်းတို့ရေ… ဘာလို့ဆို လူတိုင်းမှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိပြီးသားပဲလေ.. အဲဒီတော့ ကိုယ့်အားသာချက်က ဘာလဲ၊ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကဘာလဲ သေချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ထားဖို့လိုပြီး ဒါကိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်အဖြစ် အသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အရာရာတိုင်း အကောင်းချည်း ပြောနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက အယုံအကြည်ရှိမှာလဲနော်.. လုပ်ပြောထားတဲ့ ပုံကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့.. အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ၊ အောင်မြင်မှု၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ပြတတ်သူတွေသာ ရေရှည်မှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုရင်တောင် ရပါတယ်နော်။
ဒီအချက်လေးတွေက ယောင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ အမြင်လေးတွေကိုလည်း မျှဝေပေးသွားပေးဖို့လည်း မမေ့နဲ့ဦးနော်…
Reference: socialmediatoday, marketing-schools.com
လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ဈေးဗနျးခငျးမယျဆိုတော့ စိတျဝငျစားသှားပွီဟုတျ? တကယျတော့ လုပျငနျးခှငျအတှကျ ဈေးဗနျးခငျးတယျဆိုတာ လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ပုံရိပျကောငျးပွီး ကိုယျ့ကို လိုလားတဲ့သူ၊ ကိုယျ့အရညျအခငျြးကို အသိအမှတျပွုတဲ့သူတှေ တိုးလာဖို့ ကိုယျ့အရညျအခငျြးးကိုယျ ထုတျပွတာပါပဲ။ ဒါကို Self Marketing တဈဖွဈလဲ Self Branding လို့ချေါပါတယျ။ ဒီလို Self Branding ကို အထာကကြ လုပျတတျပွီဆိုရငျတော့ လူခဈြလူခငျလညျး ပေါမြားလာမယျ့အပွငျ ရာထူးတကျဖို့လညျး ပိုပွီး လှယျကူတတျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ Self Branding လို့ ပွောလိုကျရငျ တျောတျောမြားမြား တှေးကွောကျတတျကွတာက ကိုယျ့ကောငျးကွောငျးခညျြး ကိုယျပွောနရေငျ လူအမွငျကတျမှာပေါ့ဆိုတဲ့ ပွဿနာပါပဲ။ Introvert သမားတှဆေို ပိုဆိုးပါတယျ။ နဂိုကမှ စကားက မပွောခငျြပါဘူးဆို ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ ထိုငျပွောနရေတော့ကာ… အဆငျမပွပေါဘူးရှငျပေါ့ ယောငျးတို့ရေ… ဆိုပမေဲ့ ခကျြခငျြးကွီး လကျမလြှော့လိုကျဘဲ ဒီနညျးလမျး (၅)မြိုးကို သုံးပွီးတော့တော့ ကွိုးစားကွညျ့ပါဦးလို့ တိုကျတှနျးပါရစနေျော… ဘယျ နညျးလမျး (၅)မြိုးလဲ ဆိုတော့ကာ…
၁။ မိမိအပွုအမူကို သတိထားထိနျးသိမျးခွငျး
ဘဝရဲ့ အခနျးကဏ်ဍတိုငျးမှာ အရေးအကွီးဆုံးက မိမိကိုယျကို သိမှုပါပဲ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သိခွငျးရဲ့ နောကျမှာတော့ သတိထားထိနျးသိမျးခွငျးဆိုတာက လိုကျလာပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ပွောစရာ စကားရှိလာရငျ စကားကို ထိနျးသိမျးပွီးပွောတာ၊ ကိုယျ့နရောကို သိပွီး ပွောတာမြိုးနဲ့ အပွုအမူနဲ့ စကားလုံးရှေးခယျြမှုတှကေို သတိထားပွောဖွဈသှားတာ စသဖွငျ့ပေါ့.. ဒါတှဟော သူမြားအတှကျ စဉျးစားပေးတယျလို့ တှေးကွညျ့ရငျ ရပမေဲ့ တကယျ့တကယျမှာတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ပုံရိပျကိုလညျး မွငျ့တကျစပေါတယျ။ လူတှနေဲ့ တအားရောစရာလညျး မလိုဘဲ အဆငျပွနေိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
၂။ အခွားသူတှကေို ကူညီပါ။
ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိတဲ့သူတှကေို ကောငျးတဲ့ဘကျက ကူညီပေးတတျတဲ့သူ ဒါမှမဟုတျ မွတေောငျမွှောကျပေးတတျသူတှေ ဖွဈလာအောငျ လကေ့ငျြ့ပါ။ အရာရာတိုငျးမှာ အပွုသဘောဆောငျပွီး ကူညီအားပေးလိုစိတျရှိတယျဆိုရငျ စတေနာကလညျး ရောငျပွနျဟပျမှာပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ စတေနာနဲ့ လုပျရပျတှဟော ကိုယျ့အပျေါ အခွားသူတှရေဲ့ အမွငျကိုလညျး ပွောငျးလဲပေးတတျပါတယျ။
Related Article>>>ကုမ်ပဏီတှကေ ဘာကိုမူတညျပွီး ဝနျထမျးတှကေို ဘောနပျဈဘယျလိုပေးသလဲ ?
၃။ လိုအပျတဲ့အခကျြကိုပဲ ပွောတတျပါစေ။
လြှို့လြှို့ဝှကျဝှကျ နဖေို့ပွောတာ မဟုတျဘူးနျော… ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အကွောငျးကိစ်စတဈခုလုံးကို နားထောငျနဖေို့ကတြော့လညျး ဘယျသူက အားမှာလဲနျော.. ဒါကွောငျ့ ကိုယျပွောစရာ ရှိလာတယျဆိုရငျ ပွောလိုရာ အကွောငျးရငျးကို တိုတိုနဲ့ ရှငျးရှငျး၊ လိုရငျးကို ပွောတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အပွုသဘောဆောငျပွီး ဖျောပွတတျဖို့ကလညျး အရေးကွီးသေးတယျလနေျော… ဒီလို စကားပွောကောငျးခွငျးဆိုတာကလညျး ကိုယျ့ပုံရိပျကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျမယျ့ လကျနကျတဈခုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
၄။ အရှိကို အရှိအတိုငျးနပေါ။
ကိုယျ့အကွောငျး ကောငျးတဲ့အခကျြတှခေညျြး ရှေးပွီး Self Branding ကို မွှငျ့တငျဖို့ဆိုတာ သိပျတော့ မဖွဈနိုငျဘူး ယောငျးတို့ရေ… ဘာလို့ဆို လူတိုငျးမှာ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြရှိတယျဆိုတာကို အားလုံးသိပွီးသားပဲလေ.. အဲဒီတော့ ကိုယျ့အားသာခကျြက ဘာလဲ၊ ကိုယျ့အားနညျးခကျြကဘာလဲ သခြော ရှငျးရှငျးလငျးလငျး နားလညျထားဖို့လိုပွီး ဒါကိုပဲ ကိုယျ့ရဲ့ အားသာခကျြအဖွဈ အသုံးခတြတျဖို့လိုပါတယျ။ အရာရာတိုငျး အကောငျးခညျြး ပွောနမေယျဆိုရငျ ဘယျသူက အယုံအကွညျရှိမှာလဲနျော.. လုပျပွောထားတဲ့ ပုံကွီးဖွဈနမှောပေါ့.. အဲဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုတှေ၊ အောငျမွငျမှု၊ ရှုံးနိမျ့မှုတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ထိထိရောကျရောကျ ဖျောပွတတျသူတှသော ရရှေညျမှာ အောငျမွငျမှုတှကေို ရယူပိုငျဆိုငျနိုငျမယျလို့ဆိုရငျတောငျ ရပါတယျနျော။
ဒီအခကျြလေးတှကေ ယောငျးတို့အတှကျ အသုံးဝငျမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ယောငျးတို့ အမွငျလေးတှကေိုလညျး မြှဝပေေးသှားပေးဖို့လညျး မမနေဲ့ဦးနျော…
Tags: better, Career, self-marketing, ways